Myanmar Official Blog | Gmoneytrans
‌အော်တိုငွေသွင်း , Win Gold Bar ကိုဖွင့်ပါ
မတ် 5, 2021
အော်တိုငွေသွင်းစနစ် ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီး ရွှေဘားဆု‌‌‌ ကိုအပတ်တိုင်းရယူပါ
GmoneyTrans ရဲ့ December lucky draw promotionလေးလာပါပြီ….
ဒီဇင်ဘာ 13, 2020
GmoneyTrans ရဲ့ December lucky draw promotionလေးလာပါပြီ…. ပထမဆု-
(ပြည်ပငွေလွှဲ ၂ကြိမ်နဲ့၂ကြိမ်အထက်ပြုလုပ်သူများအတွက်) မြန််မာနိုင်ငံပို့ချင်လည်း အခမဲ့ပို့ပေးပါမည်။
အခမဲ့ပို့ပေးပါမည်။တတိယဆု- ၁သိန်းတန်ဖိုးရှိ gift box
စက်တင်ဘာ 13, 2020
GmoneyTrans အသုံးပြုသူရွှေမြန်မာများအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ၉လပိုင်း (၁၀)ရက်နေ့ မှ ၁၀လပိုင်း (၁၅)ရက်နေ့အထိ ချူဆော့ကံစမ်းပွဲလေး ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ကံစမ်းမဲကာလအတွင်း GmoneyPay အကောင့်သစ်ဖွင့်သူများအတွက် ဂီတာကံစမ်းမဲ နှင့်
GmoneyTrans ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများအတွက် ဂီတာကံစမ်းမဲ ကို ထည့်သွင်းထားပေးပါသည်။
ကဲ GmoneyPayအသုံးပြုပြီး ဂီတာတီးကြရအောင်။
ငွေလွှဲအကောင့်ဖွင့်သူဖြစ်ဖြစ်၊ ငွေလွှဲသူဖြစ်ဖြစ် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မည့်
🎉August Promotion🎉 လာမည့်ဩဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့မှ စပြီး ဩဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့ အတွင်း GmoneyPay အကောင့်ဖွင့်သူများနှင့် ငွေလွှဲပြုလုပ်သူများအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဩဂုတ်လ ကံစမ်းပွဲ တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် ပရိုမိုးရှင်းစီစဉ်ထားပါသည်။
GmoneyPay အသုံးပြုရင်း ကံထူးနိုင်ကြဖို့ ငွေလွှဲအကောင့်ဖွင့်ပြီး ငွေလွှဲပြုလုပ်ကြပါစို့။
Cashback ကူပွန်ကို ရယူလိုက်ပါ။
မေ 11, 2020
ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆွေသည် GmoneyTrans အကောင့်ကို မှတ်ပုံတင်ထားပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေသူဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြားသူများကို GmoneyTrans App ကို မှတ်ပုံတင်ပေး၍ အောင်မြင်စွာ အကောင့်ဖွင့်နိုင်သူ တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် 5000 KRW ကူပွန်ရယူနိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတွင် ကူပွန် ၅၀,၀၀၀ အထက် ရရှိပါက cashback ကူပွန် ပြန်တောင်းခံနိုင်ပြီး မိတ်ဆွေ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ဘဏ်စာရင်းသို့ ကျွန်ုပ်တို့ လွှဲပြောင်းပေးပါမည်။ အက်ပလီကေးရှင်းပြုလုပ်ရာတွင် ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
ဧပြီ 14, 2020
GmoneyTrans အက်ပလီကေးရှင်းသည် အသုံးပြုသူများကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မည်သည့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုမဆို ချက်ချင်း ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဖြည့်သွင်းလိုသော မိုဘိုင်းလ်ကွန်ယက်ကို ရွေးချယ်ပြီး GmoneyPay အကောင့်ကို အသုံးပြု၍ ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
GmoneyPay မှ ငွေသားဘယ်လိုထုတ်ယူမည်နည်း။
မိတ်ဆွေ၏ GmoneyPay အကောင့်ထဲသို့ ငွေထည့်သွင်းနိုင်ရုံသာမက ငွေပေးချေရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် မိတ်ဆွေ ငွေသားလိုအပ်နေသည့်အချိန်တွင်လည်း နီးစပ်ရာမည်သည့် စတိုးဆိုင် ATM တွင်မဆို ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်ငွေသွင်းခြင်းသည် လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး ငွေသွင်း/ ငွေလွှဲခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လုံခြုံသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ငွေသွင်းခြင်းကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေ၏ဘဏ်အကောင့်သည် GmoneyPay အကောင့်နှင့် အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်သည်။
GmoneyPay အကောင့်ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူး (၈) ချက််
GmoneyPay အကောင့်သည် မိတ်ဆွေ၏ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော တစ်ခုထဲသော ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ၏ မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများထံသို့ လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ငွေလွှဲပြုလုပ်နိုင်ပြီး မိတ်ဆွေ၏ ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 5, 2020
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ငွေလွှဲပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင်ပေးပို့လိုသောနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်သကဲ့သို့ သင့်နိုင်ငံတွင် မည့်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် လက်ခံမည်ကိုပါ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သိကောင်းစရာများ – ပေးပို့မည့်နည်းလမ်းနှင့် လက်ခံရရှိမည့်နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။